Switzerland ဆွစ်စလန်နိုင်ငံအကြောင်းလေ့လာရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » Switzerland ဆွစ်စလန်နိုင်ငံအကြောင်းလေ့လာရအောင်
Posted by Kyaemon on Aug 6, 2012 in Education, History, Money & Finance |0comments
Switzerland GDP Switzerland Scenery
Switzerland ဆွစ်စလန်နိုင်ငံရဲ့ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ အခြားနိုင်ငံတွေကဝိုင်းရံထားလို့
landlocked “ပိတ်ဆို့” ခံရတဲ့အနှုတ်ပြ ပထဝီအနေအထားရှိတာ၊
ကိုယ့်လူမျိုးစုအလုံးစုံကို “သာတူညီမျှ”ဆက်ဆံခါ တဲ့အောင်ပေါင်းနိုင်တာ ကြောင့်၊
ဆွစ်နိုင်ငံဟာ ဥရောပတိုက်က ရာချီနှစ်ပေါင်းတောက်လောင်ခဲ့တဲ့
Switzerland (German: Schweiz[note 3] [ˈʃvaɪts]; French: Suisse [sɥis(ə)]; Italian: Svizzera [ˈzvit͡sːɛra]; Romansh: Svizra [ˈʒviːtsrɐ] or [ˈʒviːtsʁːɐ], Swiss German: Schwiz), in its full name the Swiss Confederation (Latin: Confoederatio Helvetica, hence its abbreviation CH), isafederal republic consisting of 26 cantons, with Bern as the seat of the federal authorities. The country is situated in western Europe,[note 4] where it is bordered by Germany to the north, France to the west, Italy to the south, and Austria and Liechtenstein to the east.
နော်ဝေနိုင်ငံနဲ့မတူတာက ဆွစ်နိုင်ငံဟာ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မပေါက်လို့ရေငါးလုပ်ငန်းလုပ်လို့မရတာက တပန်းရှုံးနေတာ၊
နော်ဝေလို မြင့်မားထူထပ်တဲ့တောင်တန်းတွေ၊ နှင်းခဲတွေ၊ ရေကန်ချောင်းမြစ်တွေရှိလို့လဲ လယ်ယာလုပ်လို့ခက်ပြန်တာ၊
ဒီလိုအခက်အခဲ့တွေအကြားကနေ ဥရောပမှာ တော်တော်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာ၊
တဦးချင်းဝင်ငွေ US $ ၇၅၄၄၀ Current Nominal US $ ၄၆၈၁၅ PPP
IMF ဇယား အရ ၂၀၁၁ မှာ
နော်ဝေကအမှတ်စဉ် ၄ ဖြစ်ပြီး၊ဆွစ်က အမှတ်စဉ် ၈ ရတာ USA နဲ့ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ပါ၊ Germany, Canada, Australia, France, United Kingdom တို့ထက်သာနေတာပါ
List of countries by GDP (PPP) per capita – Wikipedia, the free encyclopedia
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၅၆ % အနုမြူဓာတ်အား ၃၉ % စသဖြင့်အကျိုးရှိ စွာအသုံးချနိုင်တာ၊
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် CO2 ကာဘွန်ဒိုင်အောက်စိုက် ဓာတ်တွေကင်းရှင်းနေတာ၊
Electricity generated in Switzerland is 56% from hydroelectricity and 39% from nuclear power, with 5% of the electricity generated from conventional power sources resulting inanearly CO2-free electricity-generating network. …